सलमान खानले पकाए चूल्हामा खाना, साथै खानामा मिसाए भूस – Sanjal Nepal
Homeभिडियोसलमान खानले पकाए चूल्हामा खाना, साथै खानामा मिसाए भूस
February 4, 2021 admin भिडियो 736
एजन्सी । बलीउडका भाईजान सलमान खान आफ्नो फिल्म बाहेक आफ्ना साथीभाई र आफ्ना फ्यानहरुकालागी पनि उनले मनोरञ्जन गर्ने गर्दछन् । यसैबीच सलमानको एउटा भिडियो निकै नै भाईरह बनी रहेको छ कि उनले चूल्हामा खाना पकाई रहेका छन् । उनले चूल्हामा खाना पकाई रहेको उक्त भिडियोलाई धेरैले रुचाई रहेका छन् । धेरैले सलमानको यो कामको सराहना पनि गरिरहेका छन् । उनलाई यसरी चूल्हामा खाना पकाउँदै गरेको उनका फ्यानहरुले पहिलो पल्ट नै होला सायद ।
भिडियोमा सलमानले चूल्हामा खाना पकाउँदै गरेको देखिएको छ । उनीसंगै बिना काक पनि उभिएकी छन् । बिनाले सलमानलाई खाना पकाउनमा सहयोग पनि गरिरहेकी छन् । उनले सलमानलाई मसालाको कटौरा दिईरहेकी छन् । त्यसपछि सलमानले उनलाई केही कुरा सोधेका छन् र आफै उत्तर पनि दिएका छन् ।‘भन यो के हो ? म भन्छु यो के हो भनेर । यो दही हो । र यस्मा अलिकति भूस पनि मिसाईएको छ ।’ सलमानको यो मजाकमा बिना हाँस्छिन् ।
सलमानले बिनासंग गरेको उक्त मजाकलाई उनका फ्यानहरुले निकै नै रुचाएका छन् । यो भिडियो बनाएदेखि अहिलेसम्म लगभग ६० हजार भियूज मिली सकेको छ ।जानकारीकोलागी सलमानको यो भिडियो पुरानो हो तर यो भिडियो यतिबेला सोशल मिडियामा भाईरल बनिरहेको छ । खाना पकाएको पहिलो पकट हो । तर सलमान धेरै पटक देसी अन्दाजमा आफ्ना फ्यानहरु समक्ष देखा परिसकेका छन् । लकडाउनको समयमा उनी खेतमा काम गरिरहको अवस्थामा देखा परेका थिए ।
November 2, 2020 admin भिडियो 2877
December 22, 2020 admin भिडियो 2934
December 31, 2020 admin भिडियो 3067
LEX 18 agenda conversation: Job club (444757)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (418340)
Hello world! (345721)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (318537)